22 / 02 / 2017 21 / 02 / 2017 ဒံယလေက 1227 Views စာ0မှတ်ချက် Batman, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, DC ကရုပ်ပြ, DC ကသူရဲကောင်းများ, အသေးစား, မျက်ရည် Batman, အဆိုပါ Lego Batman Movie,, TLBMvignetteseries
အဆိုပါထဲကနေတ ဦး တည်း minifigure ယူပြီး Lego Batman ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်သည်လှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်၊ ရွေးချယ်ထားသောဇာတ်ကောင်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအနေအထားအဖြစ်တည်ဆောက်ရန်တည်ဆောက်ထားသည်
အဆိုပါ Brick Fanatics အသင်းနှင့်အတူဤမျှလောက်ပျော်စရာရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ် Lego Batman ရုပ်ရှင်အသေးစားပုံများ၊ ငါတို့ vignette စီးရီးကိုတိုးချဲ့ပြီးအစုံမှအကြိုက်ဆုံးအသေးစားဓာတ်ပုံအချို့နှင့်မျက်စိကန်းသောအိတ်စီးရီးများပါ ၀ င်သည်။
အဆိုပါဒစ္စကို Batman / မျက်ရည် Batman ပိုးအိစံ မင်းအခမဲ့ဖြစ်ရင် shop.LEGO.com မှာ£ 50 သုံးဖြုန်းဖေဖော်ဝါရီလ 26 ရက်နေ့အထိ။
The ကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင်းအရာတစုံတခုရှိပါက Lego Batman Movie, စုဆောင်းထားသောအသေးစားဤဒီဇိုင်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲသူများအနေနှင့်ပျော်စရာများစွာရှိခဲ့သည်။ ထူးခြားသောလူကြမ်းဒီဇိုင်းများမှသည် Hilary အထိဖြစ်သည် Batman ဝတ်စုံများ၊ ဤသေးငယ်သောရုပ်ပုံကားချပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ကိုတကယ်ပျော်စရာကောင်းသည့်ဗင်နီဇွဲလားများပေါ်လာစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
''Batman'' နေ့ကအလုပ်။ '
အဆိုပါ Lego Batman ရုပ်ရှင်ကိုယခုဖြန့်ချိတော့မည် The Lego Batman ရုပ်ရှင်ကား Lego အစုံမှာဝယ်ဖို့လက်ရှိရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com.
ပုံမှန်ပြန်စစ်ဆေးပါ Brick Fanatics ဘို့ အများကြီးပို LEGO Batman ရုပ်ရှင်အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်အပါအဝင် စုဆောင်းထားသော Minifigure vignette စီးရီး.
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Obi-MW-Wan Kenobi
အဆိုပါ Lego Batman Movie Build - Arkham ခိုလှုံခွင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း →
ငါ ၃ နှစ်အရွယ်မှာ3TV Camera Crew အိမ်ကိုအဖေအိမ်မှာလက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်ခဲ့တယ်။ သူကသူဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကြာပြီးနောက်မှောင်မိုက်တဲ့အသက်အရွယ်မရှိသေးတဲ့ကျွန်မဟာအားသန်နေဆဲပါ LEGO ကိုချစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်မှုပြုခဲ့ပြီးယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အရင့်အမာစွဲလမ်းမှုကိုများစွာထောက်ခံသောသူကိုချစ်မြတ်နိုးသောချစ်စရာကောင်းသောဇနီးနှင့်အတူရွက်ပေါက်နေသော LEGO ချစ်သူသုံးယောက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်နေပြီဖြစ်သည်။ အဘို့အရေးသားခြင်းမဟုတ်တဲ့အခါ Brick Fanatics ငါစုဆောင်းရတာ၊ MOCing လုပ်တာ၊ ပြတာ၊ အိမ်ပြေးတာ၊ တောင်တက်တာတွေနဲ့အိမ်တွေကိုတိုးတက်တာတွေကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့အမေရိကန် Blocks မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအဖြစ်တာ ၀ န်ကိုကျေပွန်ခြင်း။